International Hotel Projects - Armati Hotel Project Na Europe
Armati Hotel Project Na Europe
Otu n'ime Armati 5 amalite hotel oru ngo na Europe,-nnọọ ka gaa na nke a hotel ịhụ anyị foset.
Tinyere freeway Florence-Siena, onye na-eche ihe na ọhụrụ na futuristic ụlọ, na anyị na-ahụ na Bargino obodo nta (nso San Casciano Val di Pesa), nwere ike ịbụ.
Ọ bụ ọhụrụ Antinori si winary, n'ihi nke nwere oké ọchịchọ oru ngo ike chọrọ site Antinori si Family, na-arụpụta wine si 26 ọgbọ na, mgbe narị afọ ise, na-akpali ya n'isi ụlọ ọrụ si n'etiti Florence ka obi "Chianti Classico" .Onye okpuru ulo bụ wuru-egwu na a ugwu wee kpuchie ụlọ na ala.
The oru ngo nke ọhụrụ winery (nke nwere oké nkwanye ùgwù maka Tuscan gburugburu ebe obibi na odida obodo) bụ ihe pụrụ iche n'ihi na agwakọta ụkpụrụ ụlọ innovations na oge a na teknụzụ mmanya Ndinam na Antinori ezinụlọ omenala.
Nke a hotel opend on February 2013.
Hotel ụlọ ịwụ oru ngo na Europe
hotel oru ngo ụlọ ịwụ foset